Sary momba ny mpahay siansa malaza - anarana farany manomboka amin'ny E
Science Famokarana Famonoana
Sary mpahay siansa malaza - E Names
Ireo mpahay siansa fanta-daza manomboka amin'ny E
Ity dia mari-pamantarana an-tsary, sary, ary sarin'ireo mpahay siansa malaza miaraka amin'ny anarana farany manomboka amin'ny taratasy E.
George Eastman - Amerikana mpamorona sy mpanentana filozofa Amerikana, izay angamba fanta-daza amin'ny fanaovana sary ho an'ny olona. Nofaritany ny fakantsarin'i Kodak sy ny sarimihetsika horonan-tsary handehanana miaraka aminy. Ny sarimihetsika miloko ihany koa dia nanjary fototra ho an'ny indostrian'ny sary mihetsika.
Charles de L'Ecluse - (fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Carolus Clusius) Dokotera flamenera sy botanista, malaza amin'ny asany amin'ny sehatry ny fambolena.
Clusius dia nametraka ny fototra ho an'ny indostrian'ny tulip. Nianatra zava-maniry maro izy.
Albert Einstein - Einstein dia mpahay fizika ara-toekarena teratany alemà, izay fantatra indrindra amin'ny fampivoarana ny Theory of Relativity. Einstein dia nahazo ny loka Nobel ho an'ny Physique tamin'ny taona 1921 noho ny "asa ho an'ny physique physique". Namorona ny lalàna momba ny foto-pahaizana momba ny foto-pahaizana izy ary malaza amin'ny fihenanam-po mitovy amin'ny E = mc 2 .
Willem Einthoven - Einthoven dia mpitsabo physiologista holandey sy botanista. Nahazo ny loka Nobel momba ny fitsaboana tamin'ny 1924 izy noho ny nofinofiny momba ny elektrokardiograma voalohany (EKG na EKG).
Fausto d'Elhuyar - Fausto sy Juan Jose d'Elhuyar no mpiara-mahita ny tungsten singa. Fausto dia mpahay simaisianina espaniola izay nandamina ny sekolin'ny harena an-kibon'ny tany any Mexique. Ny sehatry ny fahaiza-manaony dia fomba fitrandrahana maoderina.
Juan Jose d'Elhuyar - Mpikaroka ny tungsten, Juan Jose d'Elhuyar dia Mineralogista Espaniola sy mpahay simia.
Emil Erlenmeyer - Richard August Carl Emil Erlenmeyer dia mpahay simia alemà, izay mety ho fantatra indrindra amin'ny tsangambato Erlenmeyer izay noforoniny. Ny fifantohan 'i Erlenmeyer dia ny simia teôlôjika. Izy no namorona ny fitsipika Erlenmeyer, izay manambara ny fisotroan-dronono izay ampidirin'ny hydroxyl mivantana amin'ny fitezandalana roapolo dia lasa ketôn na aldehyde.
Erlenmeyer koa nanolotra ny formula for naphthalene.
Black Chemists sy Engine Engineers
Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois Biographie
Iza no Rainin'ny Chemistry?
2016 Loka Nobel momba ny Chemistry - Machines of Molecular
Joseph-Louis Proust Biographie
Dmitri Mendeleev Biography sy ny zava-misy
JJ Thomson Ny Theorie sy ny Biographie
Iza no mpitsabo voalohany?
Marie Sklodowska Curie Biographie
Manao Ranomasina ve ny Trano?
Famokarana vokatra sy ny loza ateraky ny varotra ivelany
Famaritana ny hery sy ny ohatra (Science)
Fomba fijery rehefa mihanika
7 Mpitondra mampalahelo
Nanomboka ny fitsanganana amin'ny maty Rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Kristy
Fomba 5 hankalaza ny volana Pride LGBT
Fakan-tsary momba ny atomika 5
Fiainana fiainana mialoha ny fiainana talohan'ny nahaterahana iray eto an-tany
Fihirana Krismasy malaza amin'ny Rock Rockers
Manjaka mandritra ny hazakazaka? Mankanesa kely
Ny 9 Ireo Bibikely mamotika indrindra
Steven Holl, Mpikatroka ny hazavana, ny habakabaka, ary ny akora
Texas Revolution: Battle of Gonzales
Top 10 Filipino Iray
Lee Labrada momba ny maha-zava-dehibe ny sakafom-bahinin'ny sakafo ao amin'ny bodybuilding
Italiana Verbs: Costare
Ny Tantaran'i Narnia sy ny mpanoratra CS Lewis
'Tantaran'ny ora iray'